विचार/विश्लेषण – Page5– Nepal Parikrama
रामचन्द्र लामिछाने-चैत, ३ । प्रशंसनीय खोजविधि भनेको कुनै पनि व्यक्ति, संघ संस्था वा समुदायमा रहेका जीवदायी वा प्रेरणादायी उर्जाहरुको प्रकृयागत ढंगवाट खोज गरी ती जीवन दायी उर्जाहरुको वढाउने कारणहरुको खोजी गर्ने विधी हो । प्रोफेशर डेविड कुपरराइडरका अनुसार “मानव प्रणालीको त्यही कुरा बढ्दछ जुन कुराका बारेमा दृढतापूर्वक प्रश्नहरु सोधिन्छन् र यो प्रवृत्ति तब सर्वाधिक शक्तिशाली र दिगो रहन्छ, जब खोज तथा
– कृष्ण कुमार, योगी चैत २ । गत हप्ता आइतबारको दिन । म आफ्नो दैनिकीलाई शुरु गर्ने क्रममा एकाबिहानै किर्तिपुरदेखि हानिदै बल्खु–कालीमाटी– टेकु हुदँै कमलपोखरीतिर लाग्ने क्रममा बाटोमा एक दृश्य आइलाग्यो । त्यो दृश्य दशरथ रंगशालाको विपरीत सडकमा देखा पर्‍यो । कुरा के भने: यो सडक किनारामा एक जना अन्दाजी २५–२७ वर्षका युवक सेतो टि–शर्टमा सजिएका देखिए । हुन सक्छ उनी गाडीको प्रतिक्षामा थिए । दुई चार जना व्य
लेखराज लिम्बु (बहत्तर) । चैत, १ । सन् दुई हजारबाट बेलायतमा नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै गयो र आज बेलायतको कतिपय ठाउँहरूमा नेपालीहरूको बस्ती नै देख्न पाइन्छ । नेपालीको संख्या वृद्धिसंगै संघ संस्थाको संख्या पनि बढेको छ । अहिले बेलायतमा २ सय ज्यादा संस्था रहेको सुन्नमा आउँछ । आफ्नो जात भाषा संस्कृति र समाजको हितको लागि खोलिएको जतिसुकै धेरै संस्था भएपनि मलाई हृदयबाट मनपर्छ र सकारात्मक सोच छ । संख्या
डिल्लीराम भट्टराई । कक्षा ८ पढेका निमा शेर्पाले करिब ४ सय ३४ जनाको शेयरमा मस्ती लुटिरहेका छन् भन्दा जोकोहीलाई पत्यार नलाग्ला । काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्शाफाँटमा ओभरसियर हुँदै इञ्जियर बनेका गम्भीरलाल श्रेष्ठ त झन् संस्थाका अर्का मालदार व्यक्ति हुन् । हातमा इन्ची टेप लिएर श्रेष्ठ महानगरपालिकाको जागिरे हुँ भन्दै सर्भेबाट करोडौं कमाउँछन् भने स्तुपा स्वास्थ्यसेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको व्यानरमा स्थ
वि.आर. शर्मा । आजभन्दा २६ वर्ष अगाडि बिसं. २०४४ सालमा ५० हजार नेपालीको रोजगारी, करिव २ लाखको रोजीरोटीको आधार बन्ने गरेको नेपालका ६९ वटा संस्थानको संख्या घटेर आज ३७ मा थन्किएको छ । तिनमा पनि १५ वटा खूद नाफामा र बाँकी घाटामा सञ्चालित संस्थानहरु घिटीघिटीको अवस्थामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल औषधी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगम, नेशनल ट्रेडिङ्ग, ख
पुण्यप्रसाद धमला । हिजोआज पत्रकारितामा युवा आकर्षण बढ्दो छ । तर पत्रकारिताको यस्तो आकर्षण र संख्यात्मक बृद्धिले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन् । सूचनाको सहज पहुँच र सबै क्षेत्रमा स्थापित हुन सकिने भएपछि पत्रकारितामा युवा आकर्षण बढ्नु स्वभाविक होला । अनि कुनै पेसा प्रतिको आकर्षणमा अभिरुची अथवा स्वार्थ पनि गासिएको हुन्छ । यी यावत कुराले पत्रकारितामा युवालाई आकर्षण गरेको छ । तर अहिलेको पत्रकारिता अ
– सुवाचन्द्र भण्डारी । भनिन्छ राजनीति विचार, सिद्धान्त र योजनाहरूको कुम्भ हो । यहाँबाट हजारौं विचारहरू जन्मिन्छन्, हुर्किन्छन् अनि फस्टाउँछन् । राजनीति केवल दुई/चार जना नेता कार्यकर्ताको दैनिकी मात्रै नभई आम जनताको आर्थिक, सामाजिक बिषयबस्तुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अमूर्त शक्ति हो । राजनीतिमा जति धेरै विचारहरू जन्मिए त्यति नै राजनीतिक दल, सिङ्गो राजनीति र देश नै चलायमान बन्छ । राजनीतिक दलभित